Real Madrid oo Kroos ku badalanaysa Mauro Icardi | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Real Madrid oo Kroos ku badalanaysa Mauro Icardi
Real Madrid oo Kroos ku badalanaysa Mauro Icardi
Himilo FM – Real Madrid ayaa diyaar u ah inay Toni Kroos u bandhigto kooxda Inter Milan si ay u hesho Mauro Icardi.
Real Madrid ayaa dooneysa inay la saxiixato Icardi islamarkaana hesho weeraryahan cusub oo cajiib ah. Los Blancos ayaa Juventus ka iibisay laacibka reer Portugal Cristiano Ronaldo xaggaagan, waxayna rabaan inay la soo wareegaan weeraryahan cusub.
Xaaska Icardi ahna wakiilkiisa Wanda Nara ayaa ka hadashay xiisaha xaajigeeda loo muujinayo, laakiin waxay marwalba ku adkaysatay in Icardi dooqiisa koowaad uu yahay in uu sii joogo Milan Laakiin taasi waa ay isbedeli kartaa haddii ay Real Madrid soo bandhigto heshiis lacag caddaan ah iyo la jirka Toni Kroos.
Sida laga soo xigtay wargeyska Talyaaniga ee Corriere dello Sport, Real ayaa qorsheyneysa inay dalab ka gudbiso marka uu furmo suuqa kala iibsiga sannadka cusub.
Isbedelka suuqa kala iibsiga ee noocan ah ma ahan mid si sahlan loola xiriirin karo xilli ciyaareedkan laakiin horraantii bishii Janaayo ee sannadkaan dhamaanaya 2018 ayay aheyd markii Alexis Sanchez iyo Henrikh Mkhitaryan la isku bedelay.
Corriere dello Sport ayaa sheegtay in Inter ay dooneyso inay wadahadal la furto Real si ay u xaqiijiso saxiixa Kroos.
Icardi ayaa lala xiriirinayay in uu u dhaqaaqayo Spain muddo sannado ah iyadoo Real Madrid ay kaga wanaagsan tahay doonista laacibkaan kooxda Barcelona oo ku aadan hardanka loogu jiro xiddiga reer Argentina.
Kroos, oo 28 sanno jir ah, ayaa 21 kulan u ciyaaray Real xilli ciyaareedkan, waxaana uu qeyb muhim ah ka yahay kooxda.
Waxa uu ku hoos shaqeeyay tababare Julen Lopetegui,laakiin waxa uu ku raaxeysanayaa qaab ciyaareedka Santiago Solari.
Previous: Haweenay carqaladeysay aroos iyadoo sheeganaysa inay tahay xaaska arooska
Next: Waa maxay walaaca Austria ka qabto gurigii uu ku dhashay Hitler?